filename.xls 'Haigone Kuwanikwa
musha Products DataNumen Excel Repair filename.xls 'Haigone Kuwanikwa.
Ruzivo rwakadzama nezve "filename.xls 'Haigone Kuwanikwa" Kanganiso
Kana uchivhura yakakuvadzwa kana yakashata Excel XLS kana XLSX faira ine Microsoft Excel, unoona inotevera meseji yekukanganisa:
uko 'filename.xls' izita rakaipa refaira reExcel.
Kana iyo Excel XLS kana XLSX faira yakaora uye Microsoft Excel isingazvizive, iyo Excel inogona kuudza iyi kukanganisa. Ruzivo rwekukanganisa runotsausa nekuti rinoti iyo faira haigone kuwanikwa nekuti inoverengwa chete. Nekudaro, kunyangwe iro chairo faira harisi kuverenga-chete, kana riine huwori, Excel icharamba ichitaura iko kukanganisa nekukanganisa.
Unogona kutanga watarisa kana iyo faira iri kuverenga-chete, pane inoverengwa chete nzvimbo, kana pane iri kure server. Kana iyo faira iri pane inoverengwa chete nzvimbo kana pane iri kure server, saka edza kuteedzera iyo faira kubva kune inoverengwa-chete nzvimbo kana server kune inonyorwa dhiraivhiti yemuno komputa. Iko kuve nechokwadi kuti iwe unobvisa iyo yekuverenga-chete hunhu hweiyo Excel faira.
Kana iyo faira reExcel richiri risingakwanise kuvhurwa, saka tinogona kusimbisa kuti faira rakaora. Unogona kutanga kushandisa Excel yakavakirwa-mukati yekugadzirisa basa kugadzirisa iyo yakashata Excel faira. Kana izvo zvikasashanda, saka chete DataNumen Excel Repair inogona kukubatsira.
Semuenzaniso yakashata XLS faira inokonzeresa iko kukanganisa. Kukanganisa5.xls
Iyo faira yakadzorerwa ne DataNumen Excel Repair: Kukanganisa5_fixed.xls